स्विजरल्याण्डको बर्न विश्वबिध्यालयका अनुसन्धानकर्मीहरुको टोलीले कोरोना भाइरसबिरुद्दको खोप निकाल्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको र अक्टोबरसम्म स्विस नागरिकहरुमा लगाइने दाबी गरेको छ ।...
जुलाइ २४, २०१९
एशियाबाट युरोपको स्विजरल्याण्ड करिब सात हजार पाँच सय किमी टाढा छ । यो बिचमा लाखौं हेक्टर जमिन, पहाड, पर्वत, समुद्र र बस्तिपनि छ । तर यति ठूलो भूगोल छिचोलेर एशियाको लामखुट्टे कसरि स्विजरल्याण्ड आइपुग्यो ? अचम्म र...
चिकित्शकहरु भन्छन् ‘हरेक दिन दाँत माझ्नुपर्छ ।’ प्राय विहान र साँझ दुई पटक दाँत माझ्नुपर्ने भनाई चिकित्सकको छ । अफ्रिकामा यसको अर्थ भिन्नै लाग्छ ‘दाँत माझ्ने ब्रुस दिनभरि मुखमै राख्नु ।’...
जुलाइ १२, २०१८
विश्व कप फूटबल सन् २०१८ मा प्रथम हुनेले के पाउला ? धेरैलाइ जिज्ञासा लाग्न सक्छ । सुनको ट्रफी त छँदै छ । यो पटकको विश्व कपमा विश्व बिजेता वा प्रथम हुनेले तिन करोड १० लाख युरो रकम...
गएको २५ वर्ष (सन् १९७२- २०१७) मा दश खरब टन हिउँ अन्टार्कटिकाबाट गुमेकोछ । अहिले वार्षिक २९ करोड टन हिउँ पग्लिरहेको छ । गएका २५ वर्षको क्षतीले गर्दा समुद्रि सतह आठ सेन्टिमिटरका दरले बढेको छ । यो...
समुद्रमुनी धेरै देशले इन्टरनेटका केबलहरु जोडेका छन् । समुद्रको पिँधमा खनेर त्यहाँबाट बिभिन्न ठाउँ पुर्‍याईएका हुन्छन् ईन्टरनेट केबल फाईबरहरु । यि केबलहरु ईन्टरनेट बितरणमा मात्रै नभएर भूकम्पका धक्का पत्ता लगाउनपनि उपयोगी देखिएका छन् ।...